Unashamed အာဖရိကနှင့်အတူကြှနျုပျတို့ကိုအထဲကကိုကူညီပါ — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
အခုကဖွင့် 12:34 ဘော့ဆွာနာ၌ရှိပါ၏. ဒါဟာအာဖရိကမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးအပြည့်အဝနေ့ကဖွင်နှင့်သခင်အလုပ်မှာပြီးသားဖြစ်ပါတယ်. မြေတပြင်လုံးရောကျယာဉ်အမှုထမ်းနောက်ဆုံးညဥ့်အခါဂျိုဟန်နက်စ်ဘတ်ကိုဆိုက်ရောက်နှင့်ဤနံနက်ဘော့ဆွာနာမှပျံသန်း. ကျနော်တို့ဒေသခံတစ်ဦးခရစ်ယာန်စာအုပ်ဆိုင်မှာကိုပြု၏တစ်ဦးလက်မှတ်ရေးထိုးမှာထောက်ခံသူတန်ချိန်ဒီနေ့လည်တွေ့ဆုံရန်တယ်ငါတို့သည်အချို့သောကြီးမြတ်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့. မနက်ဖြန်ညခရီးစဉ်၏ပထမဦးဆုံးဖျော်ဖြေပွဲဖြစ်ပြီးကျွန်တော် amped နေကြတယ်.
ကျနော်တို့တကယ်ကဒီခရီးစဉ်, အသီးအနှံများဖြစ်ချင်နှင့်ငါတို့သည်သင်တို့၏အကူအညီကိုချစ်လိမ့်မယ်. သင်ဘယ်လိုကူညီပေးနိုင်ပါသည်?
2 ကောရိန္သု 1:11
ကျနော်တို့ခိုင်မြဲစွာသခင်ဘုရားကိုသူ၏အစီအစဉ်ကိုထုတ်သယ်ဆောင်ရန်သူ၏လူများ၏ဆုတောင်းတစ်ခုကိုယုံကြည်. ဒါကွောငျ့သငျဆုတောငျးလကျြခွငျးအားဖွငျ့ကြှနျုပျတို့ကိုကူညီပေးနိုငျ. ဒီနေရာတွင်သည်ငါတို့အဘို့နှင့်ငါတို့နှင့်အတူဆုတောငျးနိုငျအချို့သောအခြေခံကျနည်းလမ်း:
2. ကျွန်တော်တို့ကျွန်ကဲ့သို့ကိုယျ့ကိုယျကို posture မယ်လို့
သင့်ရဲ့ဆုတောင်းချက်တွေကို fam များအတွက်ကြိုတင်ကျေးဇူးတင်ပါသည်. ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုမလိုအပ်
David kamau • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:36 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Eleanor Rigby • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:36 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Lesco101 • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:36 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Maureenwabs • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:37 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Agnes • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:37 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Lchinjala • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:37 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
JMG • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:38 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
နေသန်"JabbaBoy" Gertze • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:38 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
svetlana • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:38 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Joe-seph • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:38 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Roxanne • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:39 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Liam • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:39 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Kenyaseven • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:39 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Tylerbrabham • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:40 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Prayed for you guys. ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ.
lilcj • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:40 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Rshidell • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:40 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
QuintonTodd • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:41 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Star Carmona • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:41 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
rebecca • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:41 နံနက် • ပြန်ကြားချက်